Jekiseni Mould, Plastic jekiseni Mould, Tooling Mugadziri - Yuanfang
50sets / mwedzi
Zviri nyore kutanga bhizinesi, asi zvakaoma kuti rirambe rakavhurika.
Yuanfang Technology se ISO 9001: 2015 Certified imwe yekumira shopu inogadzira dhizaini nekugadzira chaiyo jekiseni muforoma uye epurasitiki zvakaumbwa zvikamu kubva 1996.
bhurawuza rako haritsigire tag yevhidhiyo
Kunyangwe chirongwa chako chiri chidiki pachiyero kana yakajairwa mhinduro chirongwa inoda yakakosha zvinhu, kuongorora, uye kunyatso kuuraya kusvika pakupera, tinogona kuzviita zvese. KuYuanFang mapurojekiti ese akakosha, zvisinei nehukuru. Isu tine hukama hwakakura nevanobata pamwe navo pasirese izvo zvinovimbisa kuti isu tine kugona kupedzisa chero chirongwa kubva pakutenga zvinhu kune prototype kuumba uye zvimwe zvakawanda.
Tora Quote Yemahara Izvozvi
Yuanfang inopa zvinokurumidza masevhisi pakukumbira.
Multi mhango muforoma
High-nemazvo jekiseni Mould
Kutora chigadzirwa kubva mukugadzirwa kusvika pakupedzisa ibasa rakaoma. Yuanfang Technology ichave mudiwa wako mukuvandudzwa kwechirongwa chako kubva pane pfungwa uye nekukwanisika, kuburikidza nekugadzira uye kuendesa, uku uchipa kukosha kwakanyanya. Basa redu ndere kukutungamira kune iyo nhanho nyowani yekubudirira.
Isu tinochera mukati memapurojekiti ako newe chinguva chisati chagadzirwa dhizaini uye isu tinofunga newe nzira yese kuburikidza nekugadzira uye kuendesa maitiro. Yuanfang Technology inogona kukubatsira neprototyping, yepamusoro dhizaini dhizaini, zvigadzirwa kusarudzwa, dhizaini yehupenyu hwehupenyu, uye kugadzirwa kuti usvike kune ako marefu-nguva zvinangwa.
Ruzivo. Technology Inotungamirwa. Innovation Yakagadzirirwa. Chikwata chedu chakamira chakagadzirira kukutungamira kune nhanho nyowani yekubudirira.
Ndiyo Yuanfang Technology. Nakidzwa nemusiyano.
Kuumbwa Kuedzwa & Kuumbwa
Zvinhu Zvitatu Zvausingakwanise Kuregeredza Paunotaura ...
Tsika Mould, Mould Vagadziri, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Plastic Kuisa richigadzirisa, Prototype Mould Vagadziri, Mould Factory,